Kudzidzisa Mamita Emagetsi
Kureba Kuyera Zviridzwa
Hunhu Kuyera Zviridzwa
Nguva Kuyera Zviridzwa
Tembiricha Kuyera Zviridzwa
PS Maths Zviridzwa
PS ZveSainzi Zviridzwa
MS Maths Zviridzwa
MS Zvekushandisa Zviridzwa
Vibration, Wave, Thermology Zviridzwa
Kunofambira mberi uye Iyezvino Zviridzwa
Electromagnetic Uye ZveMagetsi Zviridzwa
Optical Uye Atomic Panyama Zviridzwa
MS Chemical Zvishandiso
MS Biological Zvishandiso
Yevanhu Anatomical Model
MS Geographical Zviridzwa
Mimhanzi Kudzidzisa Zvishandiso
2014 makumi matanhatu nenomwe Kunming National Teaching Equipment Exhibition
KONZEDZERO !! Kambani YEDU Yakatora CHIKAMU MU2014 65 KUNMING NATIONAL KUDZIDZISA MISHOKO RATIDZO, VANHU VAKAWANDA VOMUDZIMAI NEOVERSEA VATENGESI VARI KUFADZA MUZVEDU ZVEDU, ZVECHIKAMU, CHEMUNYAMA, ZVIMWE ZVINANGWA ..
Lianying Kunze uye Export Trade Co, LTD. webhusaiti yekambani yakazara kudzokorora
Lianying Import uye Export Trade Co, LTD webhusaiti yekambani yakazara kudzokorora
Yueqing Lianying Kunze & Export Ltd.
Yueqing Lianying Import & Export Ltd, Co ichawanikwa muna Chivabvu, 2009. Kambani yedu kuitira kuti isimbise nekudziridza hukama hwedu hwebhizimusi pasirese kuitira kushongedza nyika.
Basa reLianYing Kambani
Nekubatanidzwa kwemusika wepasirese, vatengi vanopfuura mhiri kwemakungwa vanounza marudzi ese ezvigadzirwa kubva kuChina. Uye iyo China senyika hombe inogadzira yechiridzwa chepasi rose chekudzidzisa, inobuda mukushomeka mune zvimwe zvinhu. Tora semuenzaniso, kupararira kwemabhizinesi ane zvibereko ...
Kunyengera nerudo rwechikoro chenzvimbo dzakapunzika nekudengenyeka kwenyika
Iyo Lianying Kambani inopindura kune eesismatic chikumbiro chakazvarwa musi we15th, Chivabvu 2008, chakaitwa neChina Dzidzo Yekushandisa & Zvekushandisa. Mushure mebhodhi revatungamiriri, vanopa zvinhu zveaesismatic kuchikoro chenjodzi pa5.12 WenChuan Earthquake. Lianying Dzidzo Yekushandisa Kambani ...
Unofanirwa kunge uri kutsvaga kwedu!
Iwe hauna kukwana zvakakwana kuziva nezve Dzidzo Yekushandisa? Iwe une chero mibvunzo nezve mhando yeDzidzo Yekushandisa? Inotora foni yako, inogogodza khibhodi yako, kutaurirana nesu izvozvi! Isu tichakubatsira iwe kutenga iyo Yekudzidzisa Chombo icho mhando uye mutengo zvese mune imwechete. Zvichava kutumira t ...
WenZhou LianYing Teaching Instrument Co, LTD Kambani inogadzira inobata pasi rinotungamira rekushandisa michina. Kubvira iyo china ichipinda muWTO, uye nekukurumidza uye nyore kweruzivo rweInternet, kugara kwezvigadzirwa zveiyi kambani zvichawedzera pamusika wepasi rose. Uye zvakare, iyo ...
Musimboti Wedu: —Shamwaridzana neDzidzo - ——- Tsaurira Sosaiti ——-
Seva yeLianying Teaching Instrument webhusaiti yapinda mhiri kwemakungwa.
Seva yeLianying Teaching Instrument webhusaiti yapinda mhiri kwemakungwa. Ichi chaicho chinhu chakakodzera kupemberera. Iine kukurumidza kukura kweterevhizheni tekinoroji, Lianying zvinoenderana nazvo kushandira mutengi zvirinani. Uye zvakare, isu tinotarisira kuti tinogona kusundira "21st Century Rinoshanda Kirasi" kune iyo g ...
Lianying Enterprise Boka Kambani Bazi
Lianying Dzidzo Uye Technology Co, Ltd.
YueQing Lianying Kunze Uye Export Trade Co., Ltd.
Wenzhou Ehupfumi uye Tekinoroji Yekuvandudza Nzvimbo Electromechanical Kudzidzisa Chishandiso Fekitori